Duel ကျောင်းသည်အဆုံးမရှိ: Sexy Super Power Anime Game Cheats အတွက်အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
Duel ကျောင်းသည်အဆုံးမရှိ: Sexy Super Power Anime Game Cheats အတွက်အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ&Hack
အားဖြင့် Editor | စက်တင်ဘာလ 29, 2021
Takamagahara Academy မှာ ... မင်းကသေးသေးလေးပဲ.
ကျောင်းတွင်အအားနည်းဆုံးဟုသတ်မှတ်သည်, မင်းရှင်သန်ဖို့တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ကခေါင်းကိုငုံ့ထားဖို့ဘဲ၊ ဒါပေမယ့်စင်္ကြံတွေမှာထူးဆန်းတဲ့အသွင်အပြင်တစ်ခုပေါ်လာပြီးအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့မင်းဆီရောက်သွားတယ်။, သင်နှင့်ကျောင်းကိုကယ်တင်ရန်သင်၏ကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်လွှားနိုင်သလား?
Alice ဝေလ Kujo
အဆုံးအဖြတ်ကျောင်းသားကောင်စီခေါင်းဆောင်, အဲလစ်သည်မနာလိုမှုဖြင့်သာချီးမွမ်းနိုင်သောစွမ်းအားတစ်ခုပိုင်ဆိုင်သည်. သူကအခြားကျောင်းသားတွေကိုကူညီတာဖြစ်ဖြစ်၊ အနိုင်ကျင့်တာကိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ရပ်တယ်, အဲလစ်ဘာမဆိုလုပ်နိုင်ပါတယ်.
တိတ်ဆိတ်ပြီးရှက်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်, Inori ကသူမဘေးမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါတယ်. သူမအတန်းကိုအတန်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပေါင်းစည်းသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်အခြားကျောင်းသားများကိုသူမ၏အစွမ်းအစဖြင့်ကုစားပါ, သူမဟာဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့ကိုယ်ကျိုးမဖက်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ.
သူ့ကိုယ်သူအမြဲခက်ခဲတယ်, Inori ကသူမရဲ့စိတ်ဓါတ်မြင့်မားဖို့အတွက်မင်းကိုအားကိုးတယ်. ဒါပေမယ့်အရာတွေခြားစပြုလာတဲ့အခါ, သူမကိုဖမ်းဖို့မင်းဒီမှာရှိမလား?
စူးစမ်းလိုစိတ်နှင့်အားအင်အပြည့်, Yue သည်သင်တွေ့ဖူးသူတိုင်းနှင့်မတူပါ. အထောက်အထားမဲ့အာဏာများနှင့်စကားထာ, သူမ၏ကြီးမားသောအစာစားချင်စိတ်နှင့်စကားပြောရန်တွန့်ဆုတ်ခြင်းတို့သည်ပဟေိကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေခဲ့သည်.
သူမမင်းဆီကိုအကူအညီတောင်းတဲ့အခါ, ရှေ့ဆက်ရန်အနည်းငယ်သာနှင့်ယုတ္တိဗေဒကိုဆန့်ကျင်သောအရည်အချင်းများနှင့်သင်မတွန့်ဆုတ်ဘဲမနေနိုင်ပါ, အတိတ်မရှိတဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမင်းတကယ်ယုံနိုင်လား?
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): Anime, မင်္ဂလာပါ, Duel, ဂိမ်း, Infinite, Power, ကျောင်း, Sexy, Super
← မလှုပ်မရှားအထက်တန်းကျောင်းသူဌေးကြီး – လှိုင်သာယာ&Hack Evo Driving Urus Club Pro Cheats အတွက်အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ&Hack →